SIDA: Kamboty, diabe, ary fahatsiarovana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Desambra 2008 7:51 GMT
Panos London moa dia fikambanana manao izay hahenoana ny feon'ny olona voahilikilika sy ny mahantra amin'ny adihevitra iraisam-pirenena. Manana Andian-dahatsoratra manao hoe Growing Pains izay mampiseho ny kamboty vokatry ny SIDA. Ity lahatsary manaraka ity dia novokarina tamin'ny fampiasana ny sarin'ny ankizin'ny fiarahamonina Afrikana Tatsimo, ny fianakavian'izy ireo ary ny fijoroana vavolombelona ataony:
Tany Bangladesh, dia nisy filaharambe sy fampisehoana an-dalambe nanaraka ny andro iadiana amin'ny SIDA 2008. Ity lahatsary manarka ity dia nalain'ibdaids ary azo jerena ao amin'ny vohikalany:
Lahatsary fahatelo izay navoakan'i Sexualidad Integral any Meksika.
Ny tatitry ny SIDA 2008 izay manadihady sy mamakafaka eo amin'ny sehatry fianarana valan'aretina, fikarohana fototra sy lalin'ny fahasalamana, fikarohana ny fisorohana ny aretina (biomedical), fifantohana eo amin'ny faritra sy fanazavana amin'ny fomba hanatsarana ny ady amin'ny valan'aretina SIDA avy amin'ny SIDA 2008 sy ny fihaonambe hafa mikasika ny SIDA. Efa narahintsika ny fizotry ny fihaonambe ao amin'ny takelaka manokana mikasika izany, ary afaka misintona ny tatitra ao amin'ny IAS Website ianao na eto.